Ukudlala iidrama kwi-rock and roll band kaninzi kunomsebenzi okwaneleyo ukuba umculi asebenze, ngokukodwa kwiingcali zobuchwephesha, abaneengcali ezidumileyo. Nangona kunjalo, yonke into ngoku kunye nomculi uhamba ngokunyuka ukuba athathe imisebenzi yamagama ekhokelayo, ngokukhawuleza abe ngumntu ohloniphekileyo odibeneyo phakathi kweemvumi. Nantsi ingqalelo kwimimandla engcono yokubetha abaculi abavela kuma-80s, aboniswe kungekho myalelo othile. Kwezinye iimeko, abaculi bathanda oku kubonakala ngathi batshayela nje kuphela, kodwa kwiimeko ezinqabileyo ukusebenza kwemisebenzi emibini kubangalisa.
UKelly Keagy woMgqibelo woBusuku
Chris Walter / WireImage / Getty Izithombe
Nangona uGran Collins owayengumgcini weGenesis kunye nelungu elide lo- Eagles, uDon Henley ngokukhawuleza ekhumbuza njengengoma yokubetha ingoma yomculo wee-rock, bobabini babelana ngokunciphisa ngokunyanisekileyo kwemisebenzi yokugubha njengokuba baphumelela kakhulu njengabadlali abahamba phambili emacaleni abo kunye nakwixesha lokubetha . Ngesi sizathu, ndiqala ngoKelly Keagy weRanger Ranger, umzekelo onobugcisa obuncinci kunye nomgca we-drummer. Ukongezelela ekuhlabeleleni ukucula iingoma ezinjengobungqina bokuthi "Ndibambelele," "Dade ongumKristu," "Xa Uvale Amehlo Akho," "I-Street Sentimental" kunye ne "Goodbye," uKeagy naye wakhonza ngaphezu komculi wengoma . U-Keagy unobungcali njengomculi okhokelayo, enyanisweni, ukuba i-Night Ranger inkokeli uJack Blades, umculi owaziwayo, wanikezela iingoma ezininzi uKeagy ukuba acule. Kaninzi "
IGrant Hart kaHusker Du
I-Cover Cover I-albhamu ye-SST Records
Isiqingatha esinye seziganeko ezingummangaliso kunye nomhlaba oqhelanisayo wokubambisana naso sonke ixesha, iHart kunye neengoma zokubhala iingoma kwiqela eliqhelekileyo le- rock band u-Husker Du kunye ne-guitarist Bob Mold. Aba babini badlala ngokukratshi, kwaye uHart wakhawuleza wakha udumo njengolu xwebhu oluninzi lwabaculi abanobuchule nabanobuchule. Nangona oko kunokuba yinyaniso, uHart uye waphumelela njengendoda yezobugcisa kwiintlobo ezininzi ze-Husker Du zangaphambili, ezinomdla wokuthandaza. Izingoma ze-Hart Standart kunye neentsebenzo ziquka "I-Pink ijika kwiBlue," "Iincwadi malunga ne-UFOs" "Awufuni Ukwazi Ukuba Unesizungu" kwaye "Uxolo Ngandlela-thile."
URoger Taylor weNdlovukazi
I-Cover Cover I-albhamu ye-Hollywood Records
Ukubambelela emva kwendibano yembambano exhasa i-frontman njengoko eyala ukuba uFreddie Mercury wayengenakukwenza lula uRoger Taylor ukuba anikezele ingoma yakhe yokubhala kunye nokukhokelela phambili, kodwa ngandlela-thile iqela leDemokhrasi elomeleleyo ngaphakathi kweNdlovukazi lavumela ukuba kwenzeke ngaphezu kwembalwa maxesha. Ngaphandle kokuba ngumculi onamandla kunye nomntu ovelelekileyo wokuvumelanisa kwiimpawu zomsebenzi wonke, uT Taylor naye wathola ixesha elithile elibalulekileyo lexesha lokukhanya. Ngexesha lokugqibela lamaqela angama-80, u-Taylor wahlabelela ukukhokela kuphela ngezihlandlo, ngokukodwa kwii-albhamu ezilandelwayo "Ukuza Kungekudala," "Musa ukuLahla iNtloko yakho" kunye "Nomntu ongabonakaliyo," kodwa amazwi akhe aphezulu ngokuvisisanayo ayaqaphela phantse onke amaKhosikazi ihlase.
Gil Moore we Triumph
I-Cover Cover I-albhamu ye-RCA
Nangona u-Rik Emmett u-Rik Emmett owaziwa ngokugqithiseleyo u-Rik Emmett ulawulo lwamaqhawe aphezulu nolwazi oluqhelekileyo lwamaqhawe kunye ne- acna rock staples, u-drummer Moore naye ngokucacileyo waba ngumculi wamandla. Imidlalo isitayela esicacile ngakumbi kwezo zintlobo, uMorell usebenzisa ezinye iipayipi ezinomtsalane njengokuba ebeka idrama yamandla kwaye igcina izandi zebhanki zihamba. Ngokukodwa, iingoma ezifanelekileyo ezifana ne-"Fool for Your Love," "Yilandela Intliziyo Yakho" kunye ne "Imisindo Emvula" ekukhanyeni kweMoreck for rockers anthem, kodwa kunye nokuzimela kwayo. Amafolda amaninzi ayeya kumelana nokuva uMongameli uhlabelela phambili kwi-albhamu yonke yezinto eziphathekayo; Kunoko, uhlala njengomzekelo omkhulu waloo hlobo lomqhubi wezandi ezininzi.
UJimmy Marinos we-Romantic
I-Album Cover Cover Image ye-Epic
Njengomculi okhokelayo kule ngoma ethandekayo ye-American band entsha ye-wave band, "Into endiyithanda Ngayo," i-Marinos ixabisa ngokukhawuleza emva kwendibano yembambano, igxotha isigqi kwaye ihlakuye ngokukhawuleza izandi zezithonjana zomculo. Kungenjalo kungabonakali kakhulu njengendoda ekhokelayo, ngokukodwa kwi-band ye-self-titled 1980 debut, i-Marinos yayisisigxina esibalulekileyo sokubhaliweyo kwengoma kwada kwashiya iqela ngo-1984 emva kowe-1983. "Eyodwa kwiMillion" isebenza njengengoma efanelekileyo yokuloba i-Marinos ekhutshweyo kwaye iphosakele ilizwi lokuqhubela phambili kulolu hlobo olungaphantsi kodwa oluphawulekayo lwe-pop band yaseMerika.
One True-Hit Hitings of '80s
Iincwadi eziphezulu zezingane malunga neDinosaurs
Phezulu iVan Halen Iingoma zee-80s
ImiSebenzi yee-1940 zeeNcwadi ziqhubeka zifundiswa namhlanje
Kuphawulwa 'ama-80s aseKhanada yasePanada Amaphupha aphakamisa iziKhadi kuphela eKhanada
Phezulu Phil Collins Solo Iingoma zee-80s
Indlela i-Illinois v. I-Wardlow Case ithinteka ngayo iPolisi
Amandla eSolar: I-Pros and Cons of Power Solar
Iimeko eziguqukayo kwiiRuby Variables
IYunivesithi yaseTours Dame Admissions
Ukuloba iiBhanki zangaphandle
12 Iimzekelo zeMveliso yamandla eKhemikhali
Valmiki: Omkhulu uSage noMlobi weRamayana
IsiGaba-esingaphambi kweNqununu entsha (iiLwimi)